Board Committee – မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းပတ်ဘလစ် လီမိတက်
ကျွန်ုပ်တို့ဘုတ်အဖွဲ့က ကော်မီတီနှစ်(၂)ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ရာ (က) စာရင်းစစ်ကော်မတီ (ခ) အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေးနှင့်အခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးကော်မတီတို့ဖြစ်သည်။
စာရင်းစစ်ကော်မတီဝင်များတွင် ဦးအောင်ဇော်ဦး၊ ဦးကျော်ဇောအောင် နှင့် ဦးဘုန်းဘုန်းနိုင်တို့ ပါဝင် ကြသည်။ စာရင်းစစ်ကော်မီတီ၏ ဥက္ကဌမှာ ဦးအောင်ဇော်ဦးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းစစ်ကော်မတီသည်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့၏တာဝန်ဝတ္တရားများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအားကာကွယ်ရေး၊လုံလောက်သောငွေစာရင်းမှတ်တမ်းများကိုထားရှိထိန်းသိမ်းရေး၊ဌာနတွင်းဆိုင်ရာထိရောက်သောအတွင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်များထားရှိ်ကာကုမ္ပဏီ၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းစစ်ကော်မတီက ကျွန်ုပ်တို့ဘုတ်အဖွဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို၏ပြင်ပစာရင်းစစ်များအကြားစာရင်းစစ်သည့်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း တစ်ခုကို ထားရှိပေးမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် အခကြေးငွေပေးရေး ကော်မီတီတွင် ဦးဝင်းအောင်၊ ဦးစစ်လွင်၊ ဦးသူရိန်အောင်နှင့် ဒေါ်ခိုင်သဇင်စိုးတို့ ပါဝင်ကြသည်။ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် အခကြေးငွေပေးရေးကော်မီတီဥက္ကဌမှာ ဦးဝင်းအောင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အမည်စာရင်းတင်သွင်ခြင်းနှင့် အခကြေးငွေပေးရေး ကော်မီတီ၏ တာဝန်များ မှာ –
(က) ဒါရိုက်တာသည် အစုရှင်များ၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို မည်မျှမြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်၊ မည်မျှ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုမူတည်၍ ဒါရိုက်တာအမည်စာရင်းကို ပြန်လည်တင်သွင်းခြင်း၊
(ခ) ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသည် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာဖြစ်/မဖြစ် နှစ်စဉ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ နှင့်
(ဂ)ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသည် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏တာဝန်များကို ကောင်းမွန်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင် ခြင်းရှိ/မရှိတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ကော်မီတီက ကျွန်ုပ်တို့ ဒါရိုက်တာများနှင့် အရေးပါသော အမှုဆောင်များအတွက် အခကြေးငွေ ဆိုင်ရာမူဘောင်တစ်ရပ်အား ကျွန်ုပ်တို့ဘုတ်အဖွဲ့သို့ အကြံပြုတင်ပြရန်လည်းကောင်း၊ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ချင်းစီ နှင့် အရေးပါသော အမှုဆောင်တစ်ဦးစီအတွက် အခကြေးငွေအတိအကျ သတ်မှတ်ပေးရန် တာဝန် ရှိသည်။ဒါရိုက်တာကြေး၊ လစာများ၊ ခံစားခွင့်များ၊ ဆုကြေးများ၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ဈေးဖြင့်စတော့ရှယ်ယာ ဝယ်/ရောင်းရန်)ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ပစ္စည်းအားဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်အပါအဝင်နှင့်ယင်းတို.ချည်းသာမဟုတ်ဘဲ အခကြေးငွေဆိုင်ရာရှုထောင့်အားလုံးကို ဤကုမ္ပဏီ၏ အခကြေးငွေကော်မတီက ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကုမ္ပဏီ၏ အခကြေးငွေပေးရေးကော်မတီဝင်တိုင်းသည် ၎င်းတို.ကိုယ်တိုင်၏ အခကြေးငွေစု နှင့်ပတ်သက်သော အခကြေးငွေပေးရေးကော်မတီ၏ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ လည်းကောင်း၊ ယင်းတွက်အကြံပြုခြင်း မှလည်းကောင်း၊ ယင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခု အလို့ငှာ မဲပေးခြင်းမှ လည်းကောင်း၊ ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ကော်မီတီသည်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်ရည်အား မည်သို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်၍ လက်တွေ့ကျသော ဆောင်ရွက်မှုစံနှုန်းမှတ်ကျောက်များကို အဆိုပြုတင်ပြရမည်ဖြစ်ရာ ယင်းအချက်တွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အနေဖြင့် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအား မည်မျှမြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ကို အဆိျုပုတင်ပြရမည်။ ယင်းသို.တင်ပြရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းရေး ကော်မတီအနေဖြင့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ.တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်မှုကိုလည်းကောင်း၊ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးချင်းစီ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို လည်းကောင်း၊ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရာတွင် ကျင့်သုံးရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အား အကောင်အထည်ဖေါ်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။အမည်တင်သွင်းရေးကော်မတီဝင်တိုင်းသည်၎င်းကိုယ်တိုင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း (သိုမဟုတ်) ဒါရိုက်တာအဖြစ် အမည်တင်သွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အမည်တင်သွင်းရေးကော်မတီ၏ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှလည်းကောင်း၊ ယင်းတို့အတွက် အကြံပြုခြင်းမှလည်းကောင်း၊ ယင်းတို့ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတစ်ခုအလို.ငှာမဲပေး ခြင်း မှလည်းကောင်း ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
Our board has established three (2) committees: (a) the Audit Committeeand (b) the Nomination and Remuneration Committee.
The Audit Committee comprises of U AungZawOo, U KyawZawAung, and U Phone PhoneNaing. The Chairman of the Audit Committee is U AungZawOo.
Our Audit Committee will assist our Board in discharging its responsibility to safeguard our asset, maintain adequate accounting records and develop and maintain effective systems of internal control, with the overall objective of ensuring that our management creates and maintains an effective control environment in our Company.
Our Audit Committee will provideachannel of communication between our Board, our management and our external auditors on matter relating to audit.
Our Nomination and Remuneration Committee comprises of U Wing Aung, U Sit Lwin, U ThuraneAung and DawKhineThazinSoe. The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee is U Win Aung.
Our Nomination and Remuneration Committee is responsible for (a) re-nomination of our Directors having regard toaDirector’s contribution and performance, (b) determining annually whether or notaDirector is independent, and (c) deciding whether or notaDirectors is able to and has been adequately carrying out his duties asaDirector.
The committee also recommends to our Boardaframework of remuneration for our Directors and key executives, and determining specific remuneration packages for each Director and key executives. The recommendations of our remuneration, including but not limited to Directors’ fees, salaries, allowances, bonuses, options and benefits in kind shall be covered by our Remuneration Committee. Each member of the Remuneration Committee is required to abstain from voting on any resolutions and making recommendations and/or participating in any deliberations of the Remuneration Committee in respect of his remuneration package.
The Committee decides how the Board’s performance is to be evaluated and proposes objective performance criteria, subject to the approval of the Board, which address how the Board has enhanced long term Shareholder’s value. The Board intends to implementaprocess to be carried out by the Nominating Committee for assessing the effectiveness of the Board asawhole and for assessing the contribution by each individual Director to the effectiveness of the Board. Each member of the Nominating Committee is required to abstain from voting on any resolutions and making any recommendations and/or participating in any deliberations of the Nominating Committee in respect of the assessment of his performance or re-nomination as Director.